Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Sideed u joojin kartaa dhibka duubaya fiidiyowga?
Soo koobid: Badankeena waxaan u isticmaalnaa taleefankeena casriga ah iyo daalacashada laptop -ka shaqada iyo sidoo kale ujeedooyin madadaalo. Markay timaaddo madadaalada, daawashada filimada, fiidiyaha YouTube-ka, iyo sheekooyinka fiidiyaha ee la soo galiyay iyo kaxaynta baraha bulshada ee caanka ah ayaa ah doorashadayada aan ku dhaqaaqno. Laakiin waligaa miyaad la kulantay arrimo duubaya fiidiyowga markii aad toos ugu qulquleyso internetka? Miyaanay ahayn waxa ugu xanaaqa badan? Hagaag, mar dambe maahan! Maqaalkani wuxuu kuu oggolaan doonaa inaad gasho xoogaa hacks ah oo aad u adeegsan karto inaad si fudud u hagaajiso arrimaha ka -hortagga fiidiyowga goob kasta.
Haddii aad si joogto ah u daawato waxyaabaha ku jira khadka tooska ah, waa inaad la kulantay calaamadda duufaanta fiidiyaha ee cabsida leh.
Goobaabintaas oo si joogto ah u wareegaysa ayaa laga yaabaa inay tahay waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad aragto markaad si nabad ah isku dayeyso inaad ku raaxaysato filim leh tubbo salool ah dhammaadka wiigga.
Waxay kuu burburin kartaa khibrada oo dhan adiga.
Laakiin weligaa ma ku fikirtay sababta ay u dhacdo? Waa hagaag dabcan, xawaaraha internetka oo gaabis ah ayaa ah hal sabab oo fiidyowyada loogu ciyaaro, laakiin ma jiri karaan sababo badan oo ka dambeeya arrinta? Waxaa intaa dheer, ma jiraan wax aad samayn karto si aad u tirtirto? Nagu soo biir markaan ku tusno sida loo joojiyo dhibaatooyinka duubaya fiidiyowga mar iyo dhammaanba.
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore - Waa maxay sababta fiidiyaduhu u yaraadaan?
Markaad si toos ah uga soo daadegeyso fiidyow internet -ka, fiidiyaha laguma keydinayo keydintaada ee wuxuu ku kaydsan yahay server daruur. Waxaa loo soo dejistay sida xogta waqtiga-dhabta ah waxaana lagu ciyaaray aaladdaada. Dib -u -dhac kasta ama hakad ku yimaada soo -dejintu waxay sababi kartaa in fiidiyowgu dib u dhaco ama uu ku dhego inta lagu jiro dib -u -ciyaaridda, taasoo kugu qasbeysa inaad shaashadda ku aragto calaamad raran. Nidaamkan waxaa loogu yeeraa “kaydinta,” oo ah farsamayn hore loogu sii shubi karo fiidiyeyaasha kaydinta xusuusta aaladda.
Sida ugu habboon, raridda fiidiyaha waa inay u dhacdaa si habsami leh oo adeegsadaha ugu dambeeya uusan helin wax cillado ah inta lagu guda jiro dib-u-ciyaaridda. Laakiin tani mar walba ma dhacdo sababahan soo socda awgood:
Xawaaraha internetka oo aan ku filnayn
Haa, xawaaruhu waa muhiim. Bixiyeyaasha adeegga intarneedka waxay inta badan galaan dagaallo adag, iyagoo u ballan qaadaya dadka isticmaala inay soo dejistaan ​​xogta xawaaraha ugu sarreeya sababtan awgeed. Haddii baaxadda isku -xirkaaga internet -ka uusan ahayn mid aad u sarreeya, waxaad inta badan la kulmeysaa arrimo ku -dhuuban fiidiyaha. Waxa kale oo laga yaabaa inaad la kulanto arrintan haddii modemkaaga ama router -kaagu uu gaboobay ama uusan si habboon u shaqaynayn. Aalado aad u tiro badan oo isku shabakad isku mar ah ayaa sidoo kale tuuri kara qaladkan.
Goorma ayaad ugu dambaysay hagaajinta router -kaaga? In kasta oo aad u cusboonaysiiso router -gaaga nooca ugu dambeeya waa wanaagsan tahay, adeegsiga jiheeyayaasha duugga ah ee duugga ah ayaa mararka qaarkood ah ilaha arrimaha. Hubi haddii tilmaamaha router -ku ay la mid yihiin waxa ISP -gaagu bixinayo. Tan waxaa la mid ah, iska hubi in kombiyuutarkaagu uusan la kulmin wax arrimo ah sida darawalada shabakada duugoobay, kaararka garaafyada oo xumaaday, biraawsar shabakad khaldan, iwm.
Horey u soco, aan hadda isku dayno inaan aragno sida loo hagaajiyo duufaanta fiidiyowga iyadoo la adeegsanayo xalal fudud.
Sida loo joojiyo duubista fiidiyowga
Waxaa jira xalal badan oo lagu xallinayo dhibka duubaya fiidiyaha, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilowdo hagaajinta buugga ugu fudud (marka hore la taxay) ka dibna u gudub kan xiga haddii kii hore uusan shaqayn.
1. Hubi xawaarahaaga internetka
Haddii dhowr xubnood ay isticmaalayaan internetka reerkaaga, waxaad si dabiici ah ugu baahan lahayd isku-xir xawaare sare leh, kaas oo ku taageeri kara ka-fuulidda tayada wanaagsan aalado badan isku mar. Si aad u hubiso inta xawaare ee uu qaadanayo aaladdaadu (fiidyowgu ku duuban yahay), samee tijaabo xawaare internet oo fudud adiga oo adeegsanaya biraawsarkaaga shabakadda. Haddii xawaaruhu ka hooseeyo waxa aad u baahan tahay, la xiriir ISP -gaaga si aad u hesho qorshe baaxad ka fiican.
Tijaabi xawaaraha internetka
2. Ka bax barnaamijyada ku shaqeeya gadaal
Haddii aad la kulantid arrimo khalkhal gelinaya kombiyuutarkaaga, ka hubi culeyska nidaamkaaga hadda adoo adeegsanaya Maareeyaha Hawsha. Haddii kombiyuutarkaagu uu culeyskiisu saaran yahay hawlo oo muujinaya isticmaalka xusuusta sare, ma heli doontid dib -u -ciyaar wanaagsan oo ku saabsan fiidyowyada la sii daayay. Sababtoo ah ilaha kombiyuutarku meel kale ayuu ku mashquulsan yahay, uma sii deyn doono fiidyowyada sidii la rabay. Si aad uga gudubto arrinta, ku dhex wareeji liistada hababka oo aad ogaato kuwa cunaya kheyraadka badankood. Haddii aadan isticmaaleynin, dooro adigoo gujinaya hal mar, ka dibna ku dhufo “Hawsha Dhammeystiran” badhanka si loo joojiyo geedi socodka noocaas ah.
Xir geedi socodyada kheyraadka u baahan
3. Yaree tayada fiidiyaha aad daawanayso
Wax qarsoodi ah ma ahan in fiidiyaha qaraarka sare uu ka weyn yahay cabbirka faylka. Hadda baaxadda fiidiyaha oo weynaata, ayaa wakhti iyo awood dheeraad ah qaadan doonta si loogu sii daayo internetka oo dhan. Haddaba si aad waxoogaa u hagaajisid waayo -aragnimada daawashada, isku day inaad daawato nooca xallinta fiidiyowga. Waxaad ka heli kartaa ikhtiyaarka aad ku kala dooran karto qaraarka fiidiyaha aad rabto inaad ka daawato Netflix, YouTube, iyo aaladaha kale.
Yaree tayada fiidiyaha aad daawanayso
4. Ku soo dejiso fiidiyaha aaladdaada
Haddii aysan wax kale shaqeynin, xalka ugu fiican wuxuu noqon doonaa in fiidiyowga laga soo dejiyo kaydinta deegaankaaga. Habkan, ugu yaraan marka soo dejintu dhammaato, waxaad awoodi doontaa inaad daawato iyada oo aan kala go 'lahayn. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa khaladka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee abuurka kayd weyn adiga oo joojinaya durdurka dhowr daqiiqo ka dibna dib u bilaabi kara.
Soo dejiso fiidiyaha aaladdaada ama hakad si aad u abuurto kayd weyn
La soo degay fiidiyowga laakiin wali ma shaqeynayo? Isku day tan!
Haddii aad isku dayday oo aad tijaabisay khiyaanada soo dejinta fiidiyaha laakiin aysan weli si habsami leh u ciyaarin, faylka asalka ah ee la soo dhejiyay ayaa laga yaabaa inuu waxyeello ama kharribmo. Xaaladdan oo kale, iyada oo lagu hagaajinayo si la isku halleyn karo oo hufan qalabka dayactirka fiidiyaha waxaa lagu talinayaa.
Fikirkayaga, Dayactirka Stellar for Video waa doorashada ugu fiican ee muuqaalkan. La dagaallanka fiidyowyada kharribmay qaab kasta, software -kan ayaa ah jawaabta ugu wanaagsan ee “sida loo joojiyo duufaanta fiidiyowga”. Qalabku wuxuu raacayaa hab fudud oo 3-tallaabo ah. Waxaa la iman interface ah dareen leh taas oo ka dhigaysa la shaqeeya aad u fudud.
Sidan ayaad u isticmaali kartaa aaladdan si aad u hagaajisid duubista fiidiyowga:
U gudub bogga wax soo saarka rasmiga ah ee Dayactirka Stellar for Video oo guji "Download Free" link.
Ka dib markii faylka la soo dejiyey, laba jeer guji si aad u rakibto arjiga.
Marka rakibidda la dhammeeyo, bilow dayactirka Stellar for Video.
Interface -ka softiweerka, guji sanduuqa oranaya "Ku dar Faylka" si loogu daro faylka fiidiyaha oo u baahan dayactir. Waxaad ku dari kartaa faylal badan halkan.
Dayactirka Stellar ee shaashadda guriga Fiidiyaha (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Ka dib markaad ku darto faylasha aaladda, guji faylka "Dayactir" badhanka si aad u bilowdo hawsha dayactirka.
Dayactirka Stellar ee feylasha Fiidiyowga si loo dayactiro ayaa lagu daray (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Bar horumarineed ayaa la soo bandhigi doonaa si loo muujiyo inta hawsha la dhammaystiray.
Dayactirka Stellar ee horumarka dayactirka Fiidiyowga
Ka dib marka la dayactiro faylasha fiidiyaha, waxaad ku eegi kartaa iyaga kahor intaadan ku kaydin kombiyuutarkaaga.
Dayactirka Stellar ee fiidiyaha fiidiyaha fiidiyaha kahor kaydinta (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Ka dib markii faylka fiidiyaha la soo dejistay dayactiro, isku day inaad ciyaarto. Fikrad ahaan, waa inaadan la kulmin wax arrimo fiidiyow ah oo duufinaya hadda.
Si aad u duubto
Xakamaynta fiidiyaha waa arrin dhib ku haysa qof kasta oo qulquli kara waxyaabaha ku jira internetka. Laakiin nasiib wanaag, hadda waxaa jira dawo u leh arrinta! Ka sokow hubinta xawaarahaaga internetka iyo xiritaanka barnaamijyada asalka, soo dejinta fiidiyowga ee nidaamka deegaankaaga ayaa sidoo kale la isku dayi karaa. Haddii fiidiyaha la soo dejinayo uu sidoo kale ku guuldareysto inuu ciyaaro, ha ka waaban inaad ku dayactirto qalab sida Dayactirka Xiddigga Fiidiyowga si aad u hagaajiso duubista fiidiyowga.